बलात्कृत युवतीले गाउँ छाडिन्, बलात्कारीले गाउँलेलाई भोज खुवाए ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार बलात्कृत युवतीले गाउँ छाडिन्, बलात्कारीले गाउँलेलाई भोज खुवाए !
२०७६, २३ पुष बुधबार ०८:०६
‘मजन्मिँदा हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था अहिलेको जस्तै हुन्थ्यो भने अब्बाले मलाई स्कुल पठाउनुहुन्थ्यो,’ घरभन्दा निकै पर काठमाडौं सहरमा बसेर बुबाको न्यानो मायाबारे सुनाउँदा उनको आँखाबाट तातो आँसु बगिरहन्छ । त्यतिखेरको अवस्था राम्रो थिएन, घरकी जेठी छोरी उनले पढ्न पाइनन् । नेपालगन्ज वनघुस्राकी २२ वर्षीया नग्मा (परिवर्तित नाम) को पढ्ने रहर त्यत्तिकै हरायो ।
श्रीमान्ले माइतीकै डोजर चलाउँथे, उनी घरमै । जिन्दगीसँग कुनै गुनासो थिएन । न त गुनासो थियो परिवार, आफन्त र समाजसित । एउटै कुरा स्कुल गएर पढ्न नपाएको थकथकी भने मनमै थियो, अहिले पनि छ । गत कात्तिक १३ गते नग्मा आँखा जँचाउन श्रीमान्सँगै फुलटेक्रा आँखा अस्पताल पुगिन् । दिउँसो १ बजेतिर आँखा जाँचिसकेपछि उनका श्रीमान् नेपालगन्ज गए, उनी घर । अस्पताल जाँदा लगाएको बुर्का खोलिसकेकी पनि थिइनन् । दुई जना चिनजानकै मान्छे उनको कोठाभित्र छिरे ।
उनी घरमा कोही पनि छैनन्, किन आएको भनेर सोध्दैथिइन् । ती दुई पुरुषको जवाफ आइहाल्यो, ‘कोही नभएकाले त हामी आएका हौं ।’ स्थानीय दुई पुरुषहरू निजामुद्दिन साई र मुबारक नाउले घरमा भएको सबै गरगहना र नगद मागे । नदिए जे पनि गर्न सक्ने धम्की दिए । उनले दराजमा भएको नगद र गरगहना सुम्पिइन् । ‘यतिमात्रै लिएर जाँदा यसले प्रहरीमा उजुरी गर्न सक्छे,’ उनीहरूको सरसल्लाह थियो, ‘बरु यसलाई नै लिएर जाऔं, सबै काम उतै गरौं ।’
नग्माको ढुकढुकी झन्झन् बढ्दै गयो । साई र नाउले संकेत गरेको त्यो उतै भारतको रुपैडिया रहेछ, उनीहरूले मोटरसाइकलको बीचमा नग्मालाई राखे । पिप्रहवा गाउँ हुँदै रुपैडिया र रुपैडियाबाट अरू दुई पुरुषले दिल्ली पुर्‍याए । रुपैडिया हुँदै दिल्ली पुग्दासम्मको घटना उनको स्मरणमा छैन ।
किनभने उनीहरूले दिएको बिस्कुट र जुस खाएपछि नग्मा बेहोस भएकी थिइन् । उनी जब होसमा आइन्, ती दुई पुरुषले आफूलाई निर्वस्त्र पारेर खिचेको भिडियो देखिन् । आफूहरूले भनेझैं नगरे भिडियो सार्वजनिक गरिदिने धम्की ती पुरुषहरूले दिइरहेका थिए । नग्मालाई ‘इज्जत’ को डर लाग्यो । उनी ती पुरुषले जसोजसो भन्छन्, त्यसै गर्दै गइन् । त्यतिन्जेलसम्म नग्मालाई उनका गाउँले निजामुद्दिन र मुबारकले एक लाख भारतीय रुपैयाँमा बेचिसकेका थिए ।
ती अन्जान दुई पुरुषले उनलाई एकजना महिलामात्रै भएको नयाँदिल्लीको एउटा कोठामा पुर्‍याए । पालैपालो बलात्कार गरे । त्यतिखेर उनीहरूले नजामुद्दिनसँग गरेको कुराकानी अहिले पनि उनको दिमागमा झनझनाइरहन्छ । ‘उसको घरमा फिरौतीको कुरा भइरहेको छ, मिल्छ कि मिल्दैन तर अहिले नै त्यसै नछोड्नू,’ यताबाट फोनमा गएको आवाज उनले प्रस्ट सुनिन् । यो कुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जले गरेको कल डिटेल्स अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यतिखेर उनले जे भोगिन्, अहिलेको बयानबाट अनुमान गर्न सकिँदैन । ती दुई पुरुषले उनलाई कोठामै छाडे, बाहिरिए ।
यता उनका अम्मीअब्बा, भाइबहिनी, श्रीमान् र सासूससुराको बेचैनी उनी फर्किएपछि कम भयो । गाउँलेले प्रहरीमा जाहेरी दिन प्रेरित गरे । परिवारले न्यायको बाटो खोज्यो, कात्तिक १८ गते उजुरी बोकेर यो परिवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके पुग्यो ।उनलाई बेचेर गाउँ फर्किवरी निर्बाध घुमिरहेका निजामुद्दिन र मुबारकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । नग्माको हुटहुटी शान्त भयो । उजुरी बोकेर उनीहरू जिल्ला अदालत पुगे ।
जिल्ला अदालतको यो गत मंसिर १७ गतेको आदेश थियो । न्याय सही ट्र्याकमा गइरहेको थियो । नग्मा र उनको परिवारलाई अदालतमाथि भरोसा बढिरहेको थियो । कात्तिक १३ देखि १७ गतेसम्मको त्यो अँध्यारो दिन बिर्सिन नग्मालाई परिवारका सदस्यहरूले भरपुर साथ दिइरहेका थिए । घटनाको मिसिल र पीडकको अपराधलाई आधार मान्ने हो भने यो कम्तीमा १५ वर्ष जेल सजाय हुने घटना हो । तर जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पीडक पक्ष उच्च अदालत तुल्सीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा पुग्यो । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पवनकुमार शर्मा न्यौपाने र ऋषिप्रसाद अधिकारीले जिल्ला अदालतको आदेशको कैफियत पनि मागेका हुन् ।
घटना पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि पुस १० गतेको उनीहरूको इजलासले पीडकलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भन्दै बदर गर्ने आदेश गर्‍यो । ‘पीडितको नामको घाउजाँच फारमबाट केही घाउखत नदेखिएको र डकैती गरिएको भनिएको सामान बरामद नभएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिएको छ,’ उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । निजामुद्दिन र मुबारक एक/एक लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर थुनामुक्त भए ।
Previous articleयसरी रचिएकाे थियो सासूको हत्या योजना
Next articleआज र भाेलि देशका धेरै ठाउँमा मेघगर्जनसहित पानी पर्ने